Others – Page4– Gentleman Magazine
မနက္ေစာေစာ အိပ္ရာထခ်င္ရင္ ဒါေလးေတြ လုပ္ၾကည့္ပါ
[sg_popup id=”6″ event=”onload”][/sg_popup]မနက္ေစာေစာ အိပ္ရာထခ်င္ရင္ ဒါေလးေတြ လုပ္ၾကည့္ပါ [showhide type=”links” more_text=“>>>Unicode<<<“ less_text=”Hide Unicode “] မနက်စောစော အိပ်ရာထချင်ရင် ဒါလေးတွေ လုပ်ကြည့်ပါ (Unicode) ကျွန်တော်တို့ အများစုက မနက်စောစောအိပ်ရာထကြမှာကို မကြိုက်ကြပါဘူး။ ဒါပေမယ့် မနက်စောစောအိပ်ရာထခြင်းက ကျန်းမာရေးအရရော၊ အလုပ်အကိုင်တိုးတက်ဖို့အတွက်ကိုပါ အကျိုးကျေးဇူးများစွာရှိပါတယ်။
[sg_popup id=”6″ event=”onload”][/sg_popup]အမ်ိဳးသားမ်ားအတြက္ အိမ္တြင္းအလွကုန္မ်ား [showhide type=”links” more_text=“>>>Unicode<<<“ less_text=”Hide Unicode “] အမျိုးသားများအတွက် အိမ်တွင်းအလှကုန်များ အမျိုးသားသုံး အလှကုန်ပစ္စည်းတွေက တစ်နေ့တစ်မျိုးမရိုးရအောင် ကြော်ငြာနေတာကို မြင်ဖူးတွေ့ဖူးကြမှာပါ။ တံဆိပ်အသစ်တစ်ခုထွက်လာတိုင်း သင့်ကို ပိုကြည့်ကောင်းတဲ့ ယောင်္ကျားတစ်ယောက်ဖြစ်အောင် ဘယ်လိုဘယ်ပုံ လုပ်ပေးနိုင်တယ်ဆိုပြီး နည်းလမ်းအမျိုးမျိုးနဲ့ သွေးဆောင်နေတတ်ကြပါတယ်။ ဒါပေမယ့်
လက္ရွိ အလုပ္က ထြက္သင့္တဲ့ လကၡဏာ (၅)ခု
[sg_popup id=”6″ event=”onload”][/sg_popup]လက္ရွိ အလုပ္က ထြက္သင့္တဲ့ လကၡဏာ (၅)ခု (Zawgyi) [showhide type=”links” more_text=“>>>Unicode<<<“ less_text=”Hide Unicode “] လက်ရှိ အလုပ်က ထွက်သင့်တဲ့ လက္ခဏာ (၅)ခု (Unicode) အလုပ်မှာ အဆင်မပြေဖြစ်တာတွေက မဖြစ်မနေကြုံတွေ့ရမယ့်ကိစ္စဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အဆင်မပြေမှုတွေ များလာပြီဆိုရင်တော့
[sg_popup id=”6″ event=”onload”][/sg_popup]သင္…. ဘာလို႔ မေအာင္ျမင္ေသးတာလဲ ??? [showhide type=”links” more_text=“>>>Unicode<<<“ less_text=”Hide Unicode “] သင်…. ဘာလို့ မအောင်မြင်သေးတာလဲ ??? သင်က အရည်အချင်းရှိသူတစ်ယောက်၊ အလုပ်ကြိုးစားသူတစ်ယောက် ဖြစ်ပေမယ့် အောင်မြင်မှုနဲ့ လွဲချော်နေတယ်။ သင်က ဉာဏ်ကောင်းတယ်၊ တီထွင်ဖန်တီးမှုအားကောင်းပြီး ခံစားသက်ဝင်မှုလည်း
ေအာင္ျမင္မႈ သို႔မဟုတ္ အဆံုးမရွိသည့္ ခရီးတစ္ခု
16/06/2017 17/06/2017 escapetravelmagazine
[sg_popup id=”6″ event=”onload”][/sg_popup]ေအာင္ျမင္မႈ သို႔မဟုတ္ အဆံုးမရွိသည့္ ခရီးတစ္ခု (Zawgyi) [showhide type=”links” more_text=“>>>Unicode<<<“ less_text=”Hide Unicode “] အောင်မြင်မှု သို့မဟုတ် အဆုံးမရှိသည့် ခရီးတစ်ခု လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်ပေါင်း (၆၀)ကျော်လောက်က Edmund Hillary နဲ့ Tenzing Norgay ဆိုတဲ့
ရည္မွန္းခ်က္ပန္းတိုင္ကို လွမ္းကိုင္ႏိုင္ေစမည့္ နည္းလမ္း(၅)ခု
15/06/2017 17/06/2017 escapetravelmagazine
[sg_popup id=”6″ event=”onload”][/sg_popup]ရည္မွန္းခ်က္ပန္းတိုင္ကို လွမ္းကိုင္ႏိုင္ေစမည့္ နည္းလမ္း(၅)ခု [showhide type=”links” more_text=“>>>Unicode<<<“ less_text=”Hide Unicode “] ရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်ကို လှမ်းကိုင်နိုင်စေမည့် နည်းလမ်း(၅)ခု ဘ၀မှာပဲဖြစ်ဖြစ်၊ အသက်မွေး၀မ်းကျောင်းအလုပ်မှာပဲဖြစ်ဖြစ် အောင်မြင်နိုင်ဖို့အတွက် လုပ်ငန်းအစီအစဉ်တစ်ခု ရှိဖို့အရေးကြီးပါတယ်။ ရည်မှန်းချက်တွေ ထားရှိခြင်းက အစပြုပြီး လုပ်ငန်းအစီအစဉ်ရေးဆွဲတာ၊ သတ်မှတ်ထားတဲ့ အချိန်အကန့်အသတ်အတွင်းမှာ ရည်မှန်းချက်ပြီးမြောက်အောင်မြင်သည်အထိ
[sg_popup id=”6″ event=”onload”][/sg_popup]ဒီအက်င့္ေတြရွိရင္ ေဖ်ာက္လိုက္ပါ (Zawgyi)[showhide type=”links” more_text=“>>>Unicode<<<“ less_text=”Hide Unicode “] ဒီအကျင့်တွေရှိရင် ဖျောက်လိုက်ပါ (Unicode) ယနေ့ခေတ် လူနေမှုပုံစံက တောင်းဆိုမှုတွေ များလွန်းပြီး အချိန်တွေအများကြီးကို အသုံးပြုဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ ဒီလို အချိန်တွေ ခွန်အားတွေ အသုံးပြုပြီး လုပ်ဆောင်နေတာတောင်မှ လုပ်စရာရှိတာတွေ
[sg_popup id=”6″ event=”onload”][/sg_popup]ေအာင္ျမင္မႈအတြက္ ေဖာ္ျမဴလာ (Zawgyi)[showhide type=”links” more_text=“>>>Unicode<<<“ less_text=”Hide Unicode “] အောင်မြင်မှုအတွက် ဖော်မြူလာ (Unicode) အောင်မြင်မှုအတွက် နည်းလမ်းတွေအများကြီးရှိတဲ့အထဲကမှ ရိုးရှင်းလွယ်ကူတဲ့ ဖော်မြူလာတစ်ခု ရှိနေပါတယ်။ ဒီဖော်မြူလာကတော့ Ps = 1 – Pf ဆိုတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒီဖော်မြူလာရဲ့အဓိပ္ပါယ်ကတော့